Kuphelile ngeBMW 3 Series kuleli | Isolezwe
Kuphelile ngeBMW 3 Series kuleli
ezezimoto / 4 March 2018, 1:23pm / INTATHELI YEZEZIMOTO
AMA-BMW 3 Series abekhiqizwa eBMW Plant Rosslyn ePitoli. Maduze kuzoqala ukukhiqizwa kweBMW X3 kule mboni
KUFAKAZELEKE isisho sesiZulu esithi okungapheli kuyahlola kwaBMW Group South Africa ngesikhathi kuphela ukukhiqizwa kweBMW 3 Series Sedan embonini yale nkampani eRosslyn ePitoli.
Le mboni isikhiqize izizukulwane ezinhlanu zama-3 Series angu-1 191 604 kusukela ngo-1983.
IBMW ithe ukuyeka ukukhiqiza kuleli akusho ukuphela kwale moto kunalokho isizolandwa kwamanye amazwe.
Njengamanje ikhiqizwa ezimbonini zale nkampani eMunich, Regensburg, Araquari (Brazil), Chennai (India), Rayong (Thailand) naseMexico kusukela ngenyanga ezayo.
Ukuqedwa kokukhiqizwa kwale moto kwenziwe ngoba le nkampani ilungiselela ukukhiqiza iBMW X3 ezinyangeni ezizayo.
Isikhulu sakwaBMW Group South Africa naseSub-Saharan Africa, uTim Abbott, sithe uma bebheka emuva baba nokuziqhenya ngendlela abenze ngayo ngeBMW 3 Series ePlant Rosslyn. Uthe kube nomthelela omkhulu ekukhuleni kwabo nasemnothweni waseNingizimu Afrika.
ITHIMBA labasebenzi bakwaBMW Group South Africa beshutha neBMW 3 Series yokugcina ukukhiqizwa embonini yale nkampani eRosslyn, ePitoli
NgoNovemba 2015 iBMW Group South Africa iqinisekise ukuzinikela kwayo kuleli ngesimemezelo sokuthi izotshala uR6 billion embonini yaseRosslyn.
Lokhu kwakuwukulungiselela ukukhiqiza iBMW X3 edayisa kuleli ibuye ithunyelwe nasemazweni ase-Europe.
Ngo-Okthoba wonyaka odlule kuphinde kwatshalwa uR160 million ukuze umkhiqizo usheshe.
UMqondisi wemboni uStefan Hülsenberg, uthe lokhu kuthuthukiswa kwenze bathuthukisa umthamo womkhiqizo cishe ngo-10% usuka ku-71 000 uya ku-76 000.
Umlando weBMW 3 Series eBMW Plant Rosslyn:
Le mboni ikhiqize nezinhlobo zekhethelo njengeBMW 333i ne-325iS emlandweni wale mboni weminyaka engu-45.
NgoJuni 2015 yahlomula ngomklomelo wePlatinum Plant Quality Award kwi-J.D. Power 2015 Initial Quality Study (IQS) ngokukhiqiza i-3 Series enezinkinga ezincane.
I-BMW 3 Series yesizukulwane sesibili eyayidume ngeGusheshe yakhiwa phakathi kuka-1983 no-1992. Kwakhiwa ezimbili kuleli, i-333i ne-325iS.
Eyesizukulwane sesithathu kwaba ngeyayaziwa ngeDolphin. Yona yakhizwa phakathi kuka-1992 no-1997. Kwakhiqizwa amaDolphin angu-84 876 kanti ngo-1993 iBMW 316i yanqoba umncintiswano wemoto yonyaka iWesbank / SA Guild of Motoring Journalists (SAGMJ) Car of the Year (COTY).
Ngo-1998 kwakhiqizwa eyesizukulwane sesine ababeyiteketisa ngeleG-String. Yakhiqizwa phakathi kuka-1997 no-2004.
Angu-269 810 akhiwa kuleli kanti emhlabeni jikelele kwadayiswa angu-3 267 000. I-BMW 320d yanqoba umncintiswano i-2001 Wesbank / SAGMJ COTY
Eyesizukulwane sesihlanu kwaba ngebizwa ngeTweezer eyakhiwa eRosslyn phakathi kuka-2004 no-2011. ENingizimu Afrika kwagcina kwakhiwe angu-356 257 emhlabeni kwadayiswa angu-3 102 000. Ekhona manje ngeyesizukulwane sesithupha eyaqala ukudayisa kusukela ngo-2012. Sekukhiqizwe angu-382 658 eRosslyn kanti angaphezulu kuka-2 million adayise emhlabeni jikelele. Lokhu kusho ukuthi eyodwa kwamane adayisiwe yakhiwe ePlant Rosslyn.